I-Apartment ene-terrace enkulu kunye nemibono yolwandle - I-Airbnb
I-Apartment ene-terrace enkulu kunye nemibono yolwandle
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguOliver
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uOliver iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ifulethi ibekwe malunga neekhilomitha ezi-6 ukusuka kumbindi weMalaga kunye neemitha ezingama-300 ukusuka elunxwemeni. Kwindawo ethule kakhulu kwaye ukhethe indawo yokuhlala.
Inegumbi elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlala, ikhitshi, indawo yokupaka kunye ne-terrace enkulu ye-25 m2 ene-barbecue apho unokubona iimbono ezimangalisayo ze-bay yaseMalaga.
Ngaphambi kokubhukisha, kuyacetyiswa ukuba ucele ukufumaneka. Senza izaphulelo ixesha elide.
Ukuba ufuna iintsuku ezimbalwa kunobuncinane obufunekayo, nceda uqhagamshelane.
I-65m2 yendlu enendawo enkulu ye-25m2 eneendawo zokujonga ezintle kunye nebarbecue. Ukongeza, igumbi elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye nendawo yokupaka yabucala. Ifakwe kwindawo yaseMalaga e-El Palo, ngaphakathi kwedolophu yase-El Candado. Indawo ezolileyo kakhulu engenazo nakuphi na ukugcwala kweemoto okanye abantu, apho unokuphumla ungeva nakuphi na ingxolo.
Ekuqaleni, igumbi lalinamagumbi ama-2, kodwa elinye lakhutshwa ukuze kwandiswe igumbi lokuhlala. Kukwakho nebhedi yesofa enezitulo ezibini.
Ulwandle lweminwe kunye neendawo zokutyela kwiimitha ezingama-300. El Candado ikhosi yegalufa 200 yeemitha. Iziko laseMalaga kwi-6km. Izithuthi zikawonke-wonke umgama weemitha ezingama-400 kunye nomgca we-M-160 kunye nohambo lwemizuzu eyi-15 ukuya kumbindi weMalaga kwaye ukusuka apho ukuya kuyo nayiphi na indawo kwiphondo.
4.58 · Izimvo eziyi-41
Indawo yokuhlala ethule kakhulu. Ilungele ukuqhawula
Umbuki zindwendwe ngu- Oliver
Me considero una persona afable y muy orgulloso de Málaga. Cualquier duda que tengas al respecto de mi ciudad, será un placer poder ayudarte o facilitarte todas las cosas que necesites, para que tu estancia esté acorde a tus necesidades.
Ifumaneka iiyure ezingama-24